Management 1 Message
1.1 Back & Soo Celinta SMS
1.2 SMS Shabakadaha Free
1.3 diraan / helaan Messages on PC
1.4 dir Messages Anonymous
1.7 Message Text Forward
1.8 Track Messages
1.9 sir Messages
1.10 Messages Read
1.11 Hel Message Records
1.12 Qari Messages
1.13 Jadwalka Messages
1.14 Ladnaansho Messages Sony
1.15 Messages dir ka Mac
2.1 Fix iPhone Message Arrimaha
2.2 Messages Save iPhone
2.3 Print Messages iPhone
2.4 Delete Messages iPhone
2.5 Ladnaansho Messages iPhone
2.6 Ladnaansho Message iPhone Facebook
2.7 Raadi Messages iPhone
2.8 iPhone in Android SMS kala iibsiga
2.9 Transfer iPhone SMS
2.1 iMessages kaabta
2.11 Messages View iCloud
2.12 Messages Lugood
3.1 dhoofinta Android Messages
3.2 Message barnaamijyadooda u Android
3.3 Ladnaansho Messages Android
3.4 Ladnaansho Message Android Facebook
3.5 dir SMS Android on PC
3.6 Transfer Android SMS
4.1 Print Messages Samsung
4.2 Ladnaansho Messages Samsung
4.4 Transfer Samsung Message
4.5 Ladnaansho SMS Samsung Ace
Qaybta 1. Sida loo kaabta fariimaha qoraalka / Notes in Lugood 12 on Windows
Qaybta 2. Sida loo kaabta fariimaha qoraalka / Notes in Lugood 12 on Mac
Qaybta 3. Sidee soo celinta Text Messages / Notes ka kaabta Lugood
Lugood waa software la yaab leh u ogolaanaya iska leh aaladaha macruufka in ay dib u kor xogta oo dhan ka qalabka ay. Waxaa ka mid ah macluumaadka, Lugood dib kartaa ilaa aad sawiro, videos, fan iyo farriimo SMS iyo qoraalladaada. Notes iyo fariimaha qoraalka ah ku jiri kara, Xogta xasaasiga ah aad u muhiim ah, sidaas darteed waa sababta dadka isticmaala waa in had iyo jeer ay awoodaan in ay ku helaan iyaga, xataa haddii ay tageen on qalabka ay. Halkan waxaa ku qoran dhowr talaabo oo sahlan oo ku saabsan sida in ay dib u kor fariimaha qoraalka ah iyo qoraalo aad ku Lugood.
Marka aad dib aad iPhone dhex Lugood fariimaha qoraalka ah iyo qoraalo aad si toos ah xoojiyaa sidoo. Nasiib darro, ma dooran kartid waxa aad rabto in aad dib ilaa aan software-saddexaad. Si laguugu soo celiyo ilaa fariimaha qoraalka ah iyo qoraalo aad, aad u leedahay in aad dib dhan qalab macruufka ah. Halkan sidii ay dib aad iPhone isticmaalaya Lugood on Windows.
Wax First inaad sameyso waa in la furo Lugood iyo surin in aad qalab macruufka ah in aad PC. Iyadoo ku xiran wixii qalab aad leedahay, waxaad arki doontaa ee geeska sare ee midigta ee suuqa kala Lugood badhanka ah oo oranaya iPhone ama iPad.
Dhag siinaya batoonka in furi doonaa suuqa kala kale oo ay bixisaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qalab aad. Waxaad ka arki kartaa qeybta kaabta hoos ku qoran macluumaadka ugu muhiimsan. Si loo sameeyo gurmad ah oo ka buuxa qalab macruufka dooran 'computer Tani.' By sidaas samaynaya, dhammaan xogta aad la taageeray doonaa si aad u computer.
Intaa waxaa dheer, waxaad dooran kartaa 'gurmad sir' si loo hubiyo in dadka kale ma heli karo xogta gaarka ah ayaa la xoojiyaa.
Si habka gurmad ah si ay u bilaabaan, guji Back Up Hadda. Mararka qaarkood, a pop-up muujin karaa ilaa in ku ogaysiin doona barnaamijyadooda ku saabsan qalab macruufka ah oo aan hadda in aad Lugood Library. Haddii aad rabto in aad dib ilaa barnaamijyadooda kuwa sidoo guji Back Up Apps si ay u hagaagsan oo aad Lugood Library.
Markaas, Lugood bilaaban doona wareejinta hore Chine (haddii ay jiraan wax), iyo ka dib in habka raad raac ah oo aad qalab macruufka ah ka bilaabi doonaan. Waxaa la ogaysiinayaa in aad doonaa markii habka la dhammeeyo, oo aad u leedahay in la sameeyo oo dhan waa saxaafada 'qabtay' button buluug ah. Tani waa sida aad gurmad qoraalkaaga iyo fariimaha qoraalka ah si aad Lugood on Windows.
Backing ilaa fariimaha qoraalka ah iyo qoraalo aad ku Mac waa badan la mid ah sida ku Windows. Waxaad leedahay in la sameeyo gurmad ah oo ka buuxa qalab macruufka iyo markaas qoraalkaaga iyo farriimaha waa la badbaadin doonaa sidoo kale. Ka hor inta aadan bilaabin taageerto ilaa xogta aad, hubi in iCloud la demiyo ku saabsan qalabka macruufka. Markaas, xiriiriyaan iPhone ama iPad si aad u computer iyo abuurtaan Lugood.
Kadib markii ay Lugood, aad u ogaato qalab dhinaca bidix ee suuqa kala Lugood ah. Marka aad sidaas samayso, xaq guji qalab aad dooro 'Back Up'. Iyo, in ay tahay! Waxaad kaliya in ay sugaan illaa habka gurmad la dhammeeyo.
Marka aad isticmaasho Lugood on Windows ama Mac, halkan waxaa ku qoran liiska xogta ilaa in la taageeray doonaa, oo ayan ku jirin qoraalada iyo fariimaha qoraalka ah:
• Xiriirada iyo Contact Favorites
• Xogta Store Codsiga App oo ay ku jiraan in-app goobaha iibsadaan Codsiga, doorbidida, iyo xogta, oo ay ku jiraan waraaqaha
• Macluumaad Autofill ee Safari
• xisaab Calendar
• Dhacdooyinka Calendar
• Taariikhda Call
• Camera account Roll Game Center
• Keychain (sirta email, sirta Wi-Fi, iwm)
• xisaab-Mail (fariimaha aan la xoojiyaa laakiin Reload doonaa marka aad abuurtaan app mail ah)
• Dhammaan goobaha, Bookmarks, khasnado codsiga web / databes
• Messages (iMessage)
• Bookmarks Safari, taariikhda, iyo macluumaad kale oo
• Bookmarks YouTube iyo taariikh
• Dhammaan xogta kale marka laga reebo filimada, barnaamijyadooda, music iyo podcasts
Nasiib wanaag, soo celinta fariimaha qoraalka ah iyo qoraalo kaga imaanayo Lugood waa suurto gal, iyo sidoo kale waa mid aad u fudud. Waxaa jira kaliya hal qabsado yar. Waxaad dooran kartaa waxa aad soo celin doonaa ka gurmad. Haddii aad rabto in la soo celiyo qoraalkaaga iyo fariimaha qoraalka ah ka Lugood, waxaad u baahan doontaa in la soo celiyo wax walba oo kale kaga imaanayo in aad. Waa kuwan sida:
Si loo soo celiyo aad gurmad Lugood, aad leedahay si aad u furtid xiriiriyaan qalab macruufka hore. Markaas, furo Lugood. Marka aad qalab macruufka u muuqataa in Lugood, guji badhanka qalabka.
Under hayaan menu guji Soo Celinta kaabta.
Dooro gurmad aad u jeclaystay oo guji soo celiyo.
Sug habka soo celin dhammayn, oo aad samaysay.
Mar kale, maanka ku hayo in xogta oo dhan la doono overwritten macluumaadka laga helay raad raac aad soo xulay.
Laakiin, waxa hadii aan kuu sheegay in uu jiro software in kuu ogolaanayaa inaad doorato waxa aad doonayso in la soo celiyo ka gurmad ah. Waxaa lagu magacaabaa Wondershare Dr.Fone.
Sidaas, marka aad soo bixi Wondershare Dr.Fone, waxaa la furo oo guji "kabsado Lugood ee kaabta File." Software ayaa lagu ogaan doonaa oo dhan hayaan in la heli karaa on your computer si toos ah, oo iyaga soo bandhigaan. Waxaad dooran kartaa gurmad sax ah oo ku salaysan ay magaca ama taariikhda la abuureen.
Ayaan Marka aad dooratay gurmad ah guji 'Start Scan'. Waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo ka hor xogta oo dhan waa la soo bixiyay.
Laakiin, mar xogta la bixiyay waxaad ka arki doontaa dhammaan faylasha aad kala saaraa. Waxaad ku eegaan kartaa file kasta oo ka hor dib u soo kabashada iyo la doorto midda aad rabto in aad soo kabsaday. Haddii aadan rabin in la raadiyo file ah, waxaad si fudud u isticmaali kartaa bar raadinta ee geeska midig ee sare.
Sidaas, waxaad eegista dooran kartaa qoraalada iyo fariimaha aad rabto in aad soo kabsaday. Waxa ugu weyn ee ku saabsan Wondershare Dr.Fone waa in aad dooran kartaa meesha aad rabto faylasha aad soo kabsaday. Haddii qalabka macruufka xiran yahay waxaad soo kaban karto, qoraalada iyo fariimaha qoraalka ah si toos ah u qalabka. Haddii aan, aad si fudud u dooran kartaa inuu ka soo kabsado iyaga on your computer.
Dr.Fone Ee macruufka waa qalab aad u xoog badan, taas oo si sahlan loo isticmaali. Waxa ay taageertaa nooca ugu dambeeya ee Lugood, iyo sidoo kale qalab ku dhowaad kasta macruufka. Dr.Fone Taageertaa qalabka soo socda: iPhone 6 / Plus / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS / 3G, oo dhan iPad iyo iPod taaban 5/4. Waxaa sidoo kale laga heli karaa labada Windows iyo Mac.
Top 5 Maareeyayaasha kaabta Lugood
Sida loo sawiro ka iPhone wareejiyo Lugood
Sida loo soo celiya Lugood Library ka Computer burburtay
Sida loo tag Songs Multiple in Lugood
Sida loo beddel EPUB Cover via Lugood
> Resource > Lugood > ma fariimaha qoraalka ee kaabta Lugood / Notes? Sida loo soo celi?